Ogaden News Agency (ONA) – Dableey Hubaysan oo Gudaha Ugalay Jaamacada SIMAD ee Muqdisho.
Dableey Hubaysan oo Gudaha Ugalay Jaamacada SIMAD ee Muqdisho.
Sida ay kusoo waramayaan wararka naga soo gaadhaya magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya, koox hubeysan oon hayntooda lagaranaynin ayaa gudaha u galay xarunta jaamacadda SIMAD ee magaalada Muqdisho.
Warkan ayaa sheegaya in dableydan hubeysan ee u gudaha u galay jaamacadda ay ku labisnaayeen derayska ciidanka Qaranka Soomaaliya, waxa ayna tiradoodu gaadhaysay lix qof sida uu warbaahinta u sheegay gudoomiyaha jaamacadda Daahir Xasan Cabdi.
Waxa uu intaasi ku daray gudoomiyaha jaamacadda SIMAD Daahir Xasan Cabdi in dablaydan hubeysan ee gudaha u galay jaamacadda ay xabado ridayeen markii ay Jaamacada soo galeen, taasoo keentay in ardayda qaarkood derbiyada ka boodaan cabdi darted.
Wali lama garanayo sababta dhabta ah ee keentay in rag hubeysan ay guda u galaan jaamacadda ayuu gudoomiyaha ku sheegay in loo malaynayo in kooxdaasi ay doonayeen in ardayda ka furtaan moobilada iyo agabka kale ee ay wateen ardayda iyadoo qaarkood ardayda ay ka qaateen moobiladii ay wateen.